Golaha Amaanka oo la horgeeyey Qaraar ku aadan magaalada Qudus • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Golaha Amaanka oo la horgeeyey Qaraar ku aadan magaalada Qudus
Golaha Amaanka oo la horgeeyey Qaraar ku aadan magaalada Qudus
December 18, 2017 - By: Khalid Yusuf
Qaraarkan oo ay soo diyaarisay dowlada Masar ayaa maanta oo isniin ah cod u qaadaya Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay, waxaana looga codsanayaa in Golaha wax kama jiraan kasoo qaado go’aankii Donald Trump ku sheegay Qudus inay caasimad u tahay Israel.
Qaraarka ay soo diyaarisay dowlada Masar oo xubin ka ah Golahaasi ayaa waxaa taageersan in badan oo kamid ah Wadamada xubnaha ka ah Golaha Amaanka oo ay ku jirto dowlada UK oo iyaduna wax ku darsatay qoraalka rasmiga ah ee Qaraarkan.
Dowlada Maraykanka oo iyadu awooda VETO power ku leh golahaasi ayaa la filayaa inay awoodooda u adeegsan doonaan in Golaha cod u qaado Qaraarkan oo ay taageersan yihiin dalalka Islaamka iyo waliba in badan oo kamid ah 15ka dal ee xubnaha ka ah Golaha Amaanka.
Waxaa qaraarkan lagu sheegay in dhamaan dalalka Caalamka ay tixgeliyaan go’ aanadii hore ee UN-ta uga soo saartay arrinta Falastiin iyo Magaalada Qudus oo loo aqoonsan yahay dhul ay xoog ku qabsatay Israel, isla markaana go’aankii Maraykanka uu yahay wax-kama-jiraan.
Hadii Maraykanka uu codkiisa qayaxan ee VETO-power u adeegsado go’ aanka la filayo in Golaha Amaanka gaaro ayey dalalka Islaamka balan qaadeen inay qaraakan u gudbin doonaan Golaha Loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay, golahaasi oo uusan Maraykanka ku lahayn wax awood dheeraad ah.
Axadii shalay ayey markale dalalka Islaamka qaarkood ka dhaceen banaanbaxyo balaaran oo looga soo horjeedo Israel iyo Maraykanka, waxaana ugu weynaa mudaharaadyo ka dhacay dalalka Turkey iyo Indonesia.